कतारको जेलवाट फर्किएका बिनोद रानाभाटले पाए रंगशालामा काम, उठेको सहयोग १ करोड कता खर्च भयो ? (भिडियो हेर्नुस्) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/कतारको जेलवाट फर्किएका बिनोद रानाभाटले पाए रंगशालामा काम, उठेको सहयोग १ करोड कता खर्च भयो ? (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । कतारको जेलमा थुनिएका माडीका युवा बिनोद रानाभाट आज स्वदेश फर्किए पछी अहिले चितवनमा बन्दै गरेको अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगसालामा काम पाएका छन। चितवनमा बन्दै गरेको रंगशालामा केहि दिन पहिले मात्र रंगशाला ठेला संचालनमा आएको थियो भने त्यसै रंगशाला ठेलाको रेखदेख गर्दै आएका छन बिनोद रानाभाट।
त्यस्तै बिनोद रानाभाट अभियानमा उनलाई छुटाउन उठेको १ करोड भन्दा धेरै ब्लड मनिको अहिले पनि के के हुँदै छ र अब त्यो पैसा के गर्ने भन्ने बिषयमा पनि चितवनमा चर्चित अभियानता अर्जुन भुषालले स्पष्टीकरण दिएका छन । थप जानकारी तल भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ।
बैदेशिक रोजगारीका लागि जनरल क्लिनरको पदमा कामका लागि करीब ३ बर्षअघि कतार पुगेका चितवन माडी नगरपालिका वडा नं। ७ कीर्तनपुर हाल भरतपुर १५ निवासी विनोद रानाभाट कतारस्थित ओक्रा जेलमा थुनिएका थिए ।
कतारको जेलबाट सबैको प्रयाशपछि फर्केका बिनोद रानाभाटले नेपाल फर्केपछि सामाजिक कार्यहरुमा झुकाव देखाएका छन् । उनले बन्दै गरेको गौतम बुद्ध क्रिकेट रँगशाला निर्माणका लागि सहयोग होस् भनेर रँगशाला अघि सुन्तला बेच्न थालेका छन् । सिताराम कट्टेल धुर्मुसुले उनलाई यो जिम्मा दिएका छन् ।
बिनोदले बेचेको सुन्तला कमाईबाट उठेको रकम रँगशाला निर्माणमै खर्च गरिनेछ । पहिलो दिनमै ३ हजार हाराहारीको कमाई भएको अभियन्ता अर्जुन भुषालले बताए । ग्राहकहरुसँग रमाईलो गर्दै सुन्तला बेच्दै गरेका धुर्मुशले बिनोदलाई काम सुम्पदै उनको तारिफ गरे ।
बैदेशिक रोजगारीमा रहँदा सम्झौता अनुसारको काम गरेका रानाभाटलाई भारतीय कामदारको आक्र मण गरेकोमा ज्यानको सुरक्षाका लागि प्रति कार गर्दा भारत सनैयाका अर्का कामदारको मृ त्यु हुन पुगेको थियो । कतारस्थित अल ग्रुप क्लीनिङ कम्पनीमा जनरल क्लिन वर्कर पदमा काम गरेका उनलाई घट ना लगत्तै कतार पुलिसले प क्राउ गरी ओक्रा जे लमा राखी मु द्धा चलाएको थियो ।
मु द्धाको फैसला अनुसार रानाभाटले भारतीय कामदारको परिवारलाई ब्लड मनीका रुपमा २ लाख ६० हजार कतारी रियल अर्थात नेपाली करीब ८२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएपछि उद्धारको लागि बिनोद रानाभाट रिहाइ उद्धार समिति गठन गरेर देशविदेशबाट एक करोड २१ लाख ४८ हजार संकलन भएको समितिका संकलन भएको अर्जुन भुषालले बताए । बैदेशिक रोजगारीका लागि जनरल क्लिनरको पदमा कामका लागि करीब ३ बर्षअघि कतार पुगेका रानाभाट कतारस्थित ओक्रा जे लमा थुनिएका थिए । ३४ महिना जे ल जीवन विताएर विनोद फर्किएका हुन् ।
श्रीमानले खाडीमा कमाएको ४२ लाख लिएर श्रीमती फ’रार (भिडियोसहित)
प्रिती आलेको भुत्रो मायाजाल बिबादमा आएपछि पहिलोपटक मिडियामा:मलाइ सिध्याउने योजनामा बनाएका हुन